Faallo: Heshiiskii ASWJ iyo DFKMG
28 Feb 28, 2010 - 11:46:01 AM
W/Q: Dr. Maxamud M. Culusow, mohamuduluso@gmail.com
1. In la fuliyo go’aanka shirkii IGAD ee 30kii Jeennaayo 2010.
2. In isbeddel lagu sameyo Golaha Wasiirrada DFKMG.
3. In la baabi’iyo ASWJ, kana mid noqoto DFKMG.
4. In la aqoonsado, loogana mahadceliyo Dowladda Federaalka Ethiopia dadaalkeeda joogtada ah ee ay ugu jirto “Nabad” ka dhalinta Soomaliya.
1. In xalka iyo maareynta talada iyo siyaasadda Soomaliya looga dambeeyo Dowladda Ethiopia.
2. In Soomalidu mashquul ku ahaato Dowladnimo iyo guluf dhalanteed ah.
3. In laga dhex abuuro kooxaha Soomalida khilaaf muujya damiir la’aan iyo garasho-xumo.
4. In la abuuro dareen ah in Beesha Caalamka iyo Ethiopia ay qaaden taallaabo wax looga qabanayo dhibaatada Soomaliya si indhaha looga jeediyo barakaca iyo burburka ka dhashay fulinta Istratejiyada lagu dhaqaaqay laga soo bilaabo 2005.
1. Inaysan ku biirin DFKMG oo ay ahaato xoog iyo awood siyaasadeed oo gooni u taagan.
2. In beesha caalamka toos u taagerto ASWJ.
3. In ASWJ noqoto koox ka xoreysa dalka AL Shabab iyo Xizbul Islaam.
1. In ASWJ la burburiyo, laga adkaado ama hoos timaado xukunka DFKMG.
2. In Beesha Caalamka aysan si toos ah u taagerin ASWJ.
3. In Al Shabab iyo Xizbul Islaam aan laga adkaan ilaa dhammadka waqtida DFKMG.
Heshiiska dhexmaray ASWJ iyo DFKMG ah waa guul ay gaartay Ethiopia. Waxaan muran ku jirin in gacanta wax fulineysa iyo dadka iyo dalka la gumaadayo ay wada yihiin Soomali marka laga reebo dhibaatada Ethiopia iyo AMISOM ay geysteen ama geysanayaan si toos ah, hase yeeshe danta loo adeegayo waa mid shisheeye oo ujeedooyin kala duwan leh. Mustaqbalka Soomaliya waxaa iska leh oo wadaaga Muwaadiniinta Soomaliyeed oo laga doonayo inay si wadajir ah dhiigooda ugu difaacan Maslaxadda iyo mustaqbalka dadkooda iyo dalkooda. Soomali dhexdeeda ka wada hadasha ayaa looga gudbi karaa hagardaamo shisheeye iyo khilaafyada gudaha. The opinion above is solely the author's and does not necessarily reflect the views of Garowe Online and its affiliates.